Anyị Guarantee - MOLONG igbu zuru ezu CO., LTD
Ntị ọkachamara, Nlekọta Ọkachamara
Ogologo Ogo Njikwa Site na Sourcing na Nzipu
Na-eche mgbe niile ihe ngwaahịa ndị ị zụtara ọhụrụ na China? Na MOLONG, ọbụlagodi tupu etinye iwu gị ma ọ bụrụ dị ka onye na-ere ahịa, onye na-ekesa, ma ọ bụ onye na-achọ ịzụta gadget kachasị ọhụrụ - ngwaahịa anyị abanyela na sistemụ nke na-achọpụta ma na-enyocha ego abụọ, site na ntinye na nnyefe.
Na ibe a:
Sourcing ngwaahịa gị
Nhazi usoro ngwaahịa gị
Nwaleenụ ngwaahịa gị
Mbukota gị ngwaahịa
Ndepụta ngwaahịa gị
Mgbe anyị natara ịkwụ ụgwọ gị (Enweghị ihe nkwụnye ego ma ọ bụ ụgwọ zuru ezu), ndị enyi gị na MOLONG na-eme ihe ozugbo wee malite ịhazi usoro gị.
Ndị ọrụ anyị na-enyocha nkọwa nke usoro gị na ịhazi iwu gị. Ndị na-akpọtụrụ ahịa gị ga-echekwa maka iwu gị.
Nwalee gị Ngwaahịa
Agbanyeghị na ndị na - ebunye anyị ngwaahịa bụcha ndị tụkwasịrị obi na-emepụta ihe dị mma, anyị anaghị ewepụta ohere ọ bụla iji usoro gị.
Ngwaahịa niile na-agabiga usoro QC zuru oke:
A na-ebu ụzọ ebuga ihe niile na Center Distribution International anyị ebe ndị ọrụ nyocha a zụrụ azụ na-enyocha ngwaahịa gị dabere na usoro ogbugba ndu na nyocha chọrọ. Ihe ndị anyị chọrọ dị elu: naanị pasent 80 nke ngwaahịa ahọpụtara na mbụ ka enyere anyị stampụ ihu ọma n'oge a ka anyị nwetara iwu gị? Tupu anyị amalite ngwugwu, anyị na-eme nlezianya nyocha iji kwekọọ iwu n'ụzọ ziri ezi.
Anyị onwe anyị Quality Control otu mgbe na-enye gị ngwaahịa ọzọ nnyocha, n'ime na n'èzí, na-eso nlezianya ogbugba ndu na chọrọ.
Ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ tozuru ụkpụrụ anyị, anyị na-enye ya stampụ ihu ọma anyị. O ruola ugbu a ka ezigara gị ya!
Ndepụta nke ogbugba ndu anyị QC
MOLONG packing and delivery team na-agba ọsọ dị ka elekere, ọ bụrụgodị na anyị na-ekwu onwe anyị. A na-enyocha ihe mgbe niile maka nrụpụta ọ bụla na nrụrụ ọ bụla tupu ebupute ha iji hụ na ihe ị hụrụ n'anya n'ịntanetị bụ ihe ị nwetara n'aka onye ozi anyị. Ndị otu anyị na-enyocha nnwale iji nweta nnabata izizi n'ịntanetị mbụ, wee lelee ngwaahịa ahụ ewepụtara site na shelf iji hụ na ọ na-enyocha ngwaahịa edepụtara.
Mgbe ahụ, ọ bụ naanị mgbe ahụ, otu a na-aga n'ihu na ịkwakọba usoro ahụ, na-emegharị abụọ (na mgbe mgbe) na ngwugwu afụ na teepu.
Ọzọ, ọ bụ n’ọnụ ụzọ dị nchebe n’aka ndị ozi anyị tụkwasịrị obi na nke ekwenyesiri ike.
Ozugbo ngwaahịa gị hapụrụ ibo anyị, anyị na-esochi ya ruo mgbe ọ ruru nke gị. MOLONG ndị ọrụ ahịa na-arụ ọrụ mgbe niile n'azụ Mpaghara iji lebara mkpa na ajụjụ gị niile anya. Anyị na-eso oge mbupụ gị ozugbo, ma dị maka ọdịmma gị iji zaa ajụjụ ọ bụla, ma ọ bụ site na email, nkata ndụ, ma ọ bụ site na ekwentị. N'agbanyeghị okwu a, anyị na-anọ ebe a ijere gị ozi.
AKW InsKWỌ ndị nyocha na-arụ ọrụ
Anyị ọkachamara otu na-arụ ọrụ na-enweghị nkwụsị gburugburu elekere iji jide n'aka na gị na ngwaahịa na-ruo ụkpụrụ na ị chọrọ na kwesịrị.